Taona - Wikipedia
Ny taona dia fotoana aharetan'ny tsingerim-pihodin'ny Tany amin'ny Masoandro na tsingerim-potoana mifandraika amin'ny fitsingerenan'ny fizaran-taona iray ka manodidina ny 12 tsingerim-bolana eo ho eo izany. Miankina amin'ny zavatra eny amin'ny lanitra atao fiaingana ny refin'io faharetana io, ka maro noho izany ny famaritana ny atao hoe "taona".
1.1 Ny taon-tetiandro manara-masoandro
1.1.1 Ny taona ao amin'ny tetiandro joliana
1.1.2 Ny taona ao amin'ny tetiandro gregoriana
1.2 Ny taon-tetiandro manara-bolana
1.2.1 Taona ao amin'ny tetiandro miozolmana
1.2.2 Taona ao amin'ny tetiandro malagasy manara-bolana
1.3 Taon-tetiandro manara-bolana sy masoandro
1.3.1 Taona ao amin'ny tetiandro malagasy manara-bolana sy masoadro
Ny taon-tetiandro manara-masoandroHanova
Ny taona ao amin'ny tetiandro jolianaHanova
Ny taona ao amin'ny tetiandro gregorianaHanova
Ny taona iray ao amin'ny tetiandro gregoriana, ilay ampiasain'ny ankamaroan'ny olona amin'izao fotoana izao, dia misy 365 andro amin'ny telo taona mifanarakaraka ka misy 28 andro ny volana Febroary, fa 366 andro kosa isaky ny efa-taona izay mampisy 29 andro ny volana Febroary. Izany dia atao mba hahatonga ny efa-taona hisy 1461 andro. Ny anaran'ny taona iray, amin'ny maha daty azy, dia ny laharany nifanarahana ihany. Ny ankamaroan'ny firenena eto an-tany, izay mampiasa ny tetiandro gregoriana, dia efa samy nanitsaka ny taona faha-2017 tamin'ny taona 2017.
Ny taon-tetiandro manara-bolanaHanova
Maharitra 354,3670584 andro ny salam-paharetan'ny taona iray ao amin'ny tetiandro manara-bolana, nefa noho ny taona tsirairay izay tokony hisy andro feno dia maharitra 354 na 355 andro izany, izany hoe latsaka 10 na 11 andro raha mitaha amin'ny taona amin'ny tetiandro gregoriana.
Taona ao amin'ny tetiandro miozolmanaHanova
Ny tetiandro silamo anefa dia teo amin'ny taona faha-1438 tamin'io taona 2017 gregoriana io. Manampy izany tsy fifanadrifiana izany koa ny tsy fitovizan'ny isan'ny andro ao amin'ny taonan'ny tetiandro tsirairay. Ohatra, ny taona miozolmana iray dia misy 354 na 355 andro nefa ny taona gregoriana misy 365 na 366 andro.
Taona ao amin'ny tetiandro malagasy manara-bolanaHanova
Ao amin'ny tetiandro malagasy manara-bolana dia misy 354 na 355 andro ny taona malagasy manara-bolana, ka latsaka 11 na 12 andro izany raha mitaha amin'ny taona ao amin'ny tetiandro gregoriana. Izany hoe ny iray taona gregoriana dia misy 12 volana malagasy miampy 10 na 11 na 12 andro..
Taon-tetiandro manara-bolana sy masoandroHanova
Misy 12 volana ny iray taona nefa indraindray dia mitombo 13. Mba hanakekezana kokoa ny tsingerim-pihodinan'ny Tany amin'ny Masoandro, izay tsapa amin'ny alalan'ny zava-mitranga (eo amin'ny zava-manana aina na ny toetrandro) miankina amin'ny tsingerin'ny fizaran-taona sy ny toeran'ny kintana sy ny antokon-kintana eny amin'ny lanitra, dia anatsofohana iray volana fanampiny (volana faha-13) isaky ny telo taona eo ny tetiandro manara-bolana sy masoandro. Noho izany misy ireo tetiandro ampiasana ny fifandraisan'ny telo taona amin'ny 37 volana na ny 19 taona amin'ny 235 volana (ity no atao hoe "Tsingerin'i Metona").
Taona ao amin'ny tetiandro malagasy manara-bolana sy masoadroHanova
Misy ny tetiandro malagasy tsy tena manara-bolana fa manara-bolana sy masoandro izay mampifanandrify ny volana Alahamady amin'ny fari-potoana ao amin'ny volana Marsa sy Avrily. Misy 354 na 355 ny iray taona nefa mety ho lasa 383 na 384 na 385 izany vokatry ny fampifanandrifiana ny fiantombohan'ny volana Alahamady amin'ny tsinam-bolana akaiky ny 21 Marsa.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Taona&oldid=999440"
Dernière modification le 29 Desambra 2020, à 14:32
Voaova farany tamin'ny 29 Desambra 2020 amin'ny 14:32 ity pejy ity.